IKultur NeuDenken - i-OYOUN
Inkcubeko yokuCinga ngokuNtshame2020-09-09T09:19:07+00:00
I-Oyoun icinga, iphuhlisa kwaye isebenzise iiprojekthi zobugcisa-zenkcubeko ngokusebenzisa i-decolonial, queer * ubufazi kunye nembono yokufuduka.
I-Oyoun idala indawo yengxoxo enobuzaza, ukubonakalisa uvavanyo kunye nokuqina. Uluhlu lwenkcubeko eyahlukeneyo, u-Oyoun ukumema kwindawo yenkcubeko kunye nemveliso yolwazi. Iziko lenkcubeko elingenzi nzuzo lizibona njengeqonga lamagcisa abonakalayo, umdlalo weqonga, uncwadi, umdaniso, umculo, nokunye okuninzi.
Njengeziko lenkcubeko, sinikezela ngeqonga lokudibana, ubugcisa obufudukayo kunye nobugcisa bezizwe ngezizwe, indawo eyenza incoko phakathi kwezihloko zalapha ekhaya, kuzwelonke nakwamanye amazwe kwinqanaba lobugcisa:
Uhlobo noCingo | Imbali yeBali
I-Oyoun - iWissmannstrasse 32, 12049 Berlin
ubumbano endaweni yamalungelo!
Uluntu lwethu yindibano yesininzi. Izinto ezininzi ezahlukileyo ezinomdla ziyahlangana kwaye zihlala zifumaneka phakathi. Idemokhrasi kufuneka iphinde iguqulwe yonke imihla - kodwa ihlala ikwimeko enye: ikwangumntu wonke, * wonke umntu njengesixhobo samathuba amaninzi!
Ngaba awufuni kuphoswa nto? Ngaba ungathanda ukuthatha inxaxheba kwaye ufunde ngakumbi? Ngaba ungathanda ukuthatha inxaxheba kumkhankaso wobumelwane okanye uxelelwe nje? Emva koko bhalisela ileta yethu:
FUMANA UNXIBELELWANO NAM
Unawo umbuzo okanye umbono malunga nengcinga, inkqubo okanye intsebenziswano? Emva koko uzive ukhululekile ukusibhalela umyalezo kwaye siya kubuyela kuwe kungekudala.
Izinto ezenziwe ngesandla ngu- Imithombo yeendaba eNeukölln, eBerlin
Iprojekthi kaKultur NeuDenken UG ixhaswe liSebe leSenetha leNkcubeko kunye neYurophu. IINKCUKACHA ZOQHAGAMSHELWANO / UMGAQO-NKQUBO EZIYIMFIHLO
Sisebenzisa ii-cookies ukuqinisekisa ukuba sikunika amava afanelekileyo kwiwebsite yethu. Ukuba uqhubeka usebenzisa le ndawo siya kuthatha ukuba uyavuya ngayo. Fumanisa Okuninzi.